Matoatoa amin'ny marketing taloha, ankehitriny ary ho avy | Martech Zone
Matoatoa amin'ny marketing taloha, ankehitriny ary ho avy
Alahady, Desambra 22, 2013 Alakamisy, Aprily 1, 2021 Douglas Karr
Isan-taona dia sahirana aho na manoratra vinavina na tsia hampiroborobo ny an'ny hafa. Kapost dia nametraka ity sary ity - Ny matoan'ny Marketing taloha, ankehitriny & ho avy:
Ny tanjon'ny infographic-nay dia ny naka sary ny lasa, ny ankehitriny ary ny ho avy tsy lavitra amin'ny marketing. Manantena izahay fa tianao izany.
Mampaninona ahy ny faminaniana satria mety hametraka fanantenana tsy hahomby fotsiny izy ireo. Mino aho fa toy izao ny fisian'ny marketing amin'ny media sosialy. Na dia fampitaovana tsy mampino aza hividianana marketing, mino aho fa nanaloka ny tetika marketing hafa izay mahomby hatrany. Tsy midika izany fa tsy mandaitra ny media sosialy - ny mifanohitra amin'izay no izy. Mino fotsiny aho fa nandany fotoana sy ezaka be tamin'ny fampiasana media sosialy ireo mpivarotra ka hadinon'izy ireo fa ny mpanelanelana toy ny mailaka dia mbola nitondra fivezivezena sy fifanakalozana taonina.
Ity ny torohevitro - refeso ny fiantraikan'ny ny ezaka amin'ity taona lasa ity haminavina ny teti-bolanao hanohizana ny famatsiana ny ezaka marketing anao amin'ny taona ho avy. Ity misy lakile lehibe iray, na izany aza. Manokàna isan-jato manokana amin'ny teti-bolanao hizahana tetika vaovao na fanandramana ny farany sy ny lehibe indrindra. Hanala ny hetahetanao amin'ny manaraka izany mamirapiratra zavatra manintona ny sainao.
Tags: mailaka batch-and-blastvotoatin'ny marikaCalling coldfambolena anatyHyper-personalizationkapostfampiharana marketingautomation marketingvinavina Analyticsteknolojia azo ampiasaina
Ireo karazana 7 mpivarotra nomerika